निक्कै मेहनत गरेर तथ्याङ्कहरु राख्‍नु भएको रहेछ । एकदमै जानकारि मुलक लाग्यो मलाई । कुनै बेला यो जानकारी चाहिएमा अरु साथीहरुलाई पनि दौंतरी बाटै यो उपलब्ध हुने भयो ।
आफ्नै देशको बारेमा धेरै कुरा थाहा रहेनछ :) धन्यावाद ।
एकलब्य जि धन्यबाद! सार्है मिहेनेत गरेर दौतरिमा प्रस्तुत गर्नु भएको यस तथ्यांक ले नेपाली समाज र जातजाती सम्बन्धी अधिकतम जानकारी हामिलाइ पस्केको छ ।
ठरकीजी र प्रविणजी,
लगभग २ वर्षजति अघि नेपालमा जातीय राज्य सम्बन्धी बहस निकै उत्कर्षमा रहेका बेला, मलाई आफ्नै मुलुकको जातीय संरचना र बनोटबारे बुझ्न निकै मन लाग्यो र त्यसैले पाए सम्म तथ्यांक बटुली ( केन्द्रीय तथ्यांक विभागको वेबसाइट, सि आइ ए फ्याक्टबुक र विकिपिडियाको स्रोतबाट ) हरेक कोणबाट यसलाई नियाल्न मिल्ने गरी लगभग २० पृष्ठको लेखोट तयार पारेँ । मैले प्रकाशनार्थ पनि एक दुई अनलाईन तथा छापाका प्रकाशनहरूलाई पनि त्यो प्रेषण गरेको थिएँ तर पनि त्यो पुर्ण लेख एकैचोटि प्रकाशित गर्न सम्भव भने थिएन । तर अपशोस के भने , मैले जसरी तथ्य बटुलेर राखेको थिएँ , हुबहु त्यही तथ्यांक सहितका लेखहरू पनि नेपालका स्तरीय भनेका छापाका पत्रिकामा समेत आएको देख्दा मलाई साह्रै अचम्म लाग्यो । त्यतिबेला लेखकको नाम बाहेक अरू प्रयासहरू मेरो देख्दा नै म अचम्म परेको थिएँ । तर दोष मेरै थियो, किनभने त्यो कुनै अनलाइन पत्रिकामा छापिएको थियो र तथ्यांक कपी गरेर राख्न नसकिने कुरै भएन । तर साथसाथै मैले गूगल डकूमेण्टमा सुरक्षित राखेको पनि हुनाले यो तथ्यांकलाई फेरि आफ्नै ब्लग दौँतरीमा प्रकाशित गर्न पाएकोमा धेरै खुशी पनि छु। आशा छ जातीय राज्यहरूको संघीय राज्यमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्नु पर्छ भन्ने कुराको बहसमा यो तथ्य र तथ्यांकसंग परिचित भएर मात्र सरिक बन्दा हामी बढी वस्तुपरक हुन सक्छौँ ।
ठरकीजी, मैले तथ्यको टेबललाई राखेर प्रकशित गर्न सकेको थिइन र त्यो काम गरिदिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद ।
रोचक र ज्ञानबर्दक लाग्यो तपाइको लेखोट। यसबारे अली अली थाहा भए पनो जात जाती हरु कसरी छरिएका छन र कुन क्रमाकंमा पर्दछन थाहा थएन।
अरुको तथ्य लिने या सामाग्री लिने र आफुले लेखे जस्तै बनाउने त हामीमाझ अझै कायमै छ, म त्यसमा अच्मम मान्दिन।
मैल अहिले बहश भइरहेको कुरा के भने, भन्दा जात भात रोक्नु पर्छ भन्ने अनी राज्य चांही जात जातको चाहिन्छ भन्ने। हामी अगाडी बढ्दै छौं कि पछाडी जादैंछौं। यस बेलामा आएर जयस्थिती मल्लको युग तिर फर्किन त सुहाउदैन नी?
यस्तो तथ्यांक भएको देशमा एक मधेश एक प्रदेशको नारा कसरी लगाउन मिल्छ ? यी मधेशीका मसीहा भनाउँदाहरूलाई यो तथ्यांक देखाउनुपर्ने हो ।
जातिगत तथ्यांक उपयेागि छ । धन्यवाद, यसलाइ देश वनाउने ठेकेदारहरूले बुझेर मात्र प्रदेश र राज्यकेा कुरा गर्नु राम्रेा हुनेछ । नत्र त अव पछिकेा पुस्ताले उहि माइला दाजुकेा हालत वनाउदैन भन्ने के ग्यारेन्टि, कि कसेा ?